www.adhicadeeye.com – Somali News
War deg deg ah : Qarax ka dhacay magaalada Adhicadeeye ee gobolka Sool.
Qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gudaha Kaam ay deganaayeen dadkii ku xoolo beeley Abaarihii dhawaan ka jiray dalka. Qaraxan ayaa waxaa ku dhintay 1 qof oo carruur ah iyo 12 qof...
Suldaan Mustafe oo shir la yeeshay dhalinyarada degmada Adhicadeeye.
Shir balaaran oo ay isugu yimaadeen dhalinyarada degmada adhicadeeye iyo hogaanka dhaqanka Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed ayaa ka qabsoomay degmada adhicadeeye. Shirkan ayaa gebo gebo u ahaa shir balaaran oo in muddo ah ba...
QODOBADA KASOO BAXAY SHIRKA ADHICADEEYE
Shir ballaadhan oo ay isugu yimaadeen madax dhaqameedka hogaanka guurtida beesha fiqishini ganacsatada iyo aqoonyahanka ayaa ka furmay degmada adhicadeeye 7/7/2017 shirkaasi oo ku furmay duco iyo alla bari ka dhacay beerta suldaan mustafa...
DENMARIK OO KU DHAWAAQDAY QORSHE LAYAAB LEH QORSHAYNTA QOYSASKA
Denmark ayaa ku dhawaaqday kharashaad dheeri ah oo ay siin doonto dalalka soo koraya si loogu adeegsado qorshaynta qoyska, iyadoo sheegtay in arrintaasi ay gacan ka gaysan doonto “Xakamaynta caddaadiska Yurub ka haysta soo...
DHACDO LA YAAB LEH OO KA DHACDAY DEEGAANKA ARABSIYO
Sida wararka aan heleyno ay sheegayaan waxaa deegaanka Arabsiyo lagu qabtey dad lagu eedeyey in ay qodayeen qabriga wadaan caan ahaa. Ciidamo booliska Somaliland ka tirsan ayaa qabtey ragan oo markaa faraha kula jirey...
Dhageyso: Diyaarado Duqeyn ka Geystay Somaliland
Diyaarado aan la aqoonsan dalka laga leeyahay oo kuwa dagaalka ah ayaa rasaas ku riday deegaanno ka tirsan Somaliland, sida uu VOA u sheegay guddoomiyaha gobolka Salal Axmed Maxamed Xaashi. Diyaaradahan ayaa rasaas ku...
Waa kee baasaboorka soomaaliga ee ay Noorweey sheegtay in eey aqoonsan tahay?
Sida ay maanta qortay wakaaladda wararka Soomaaliya u faafisa ee SONNA, ayaa iyadoo soo xiganeeysaAgaasimaha hey’adda socdaalka iyo jinsiyaddaha Maxamed Aadam Koofi sheegtay in dowladdda Noorweey ay aqoonsan tahay baasaboorka soomaaliga ah, gaar ahaan...
Dhageyso: Qodobada ay Somaliland iyo Khaatumo ku heshiiyeen.
Halkan hoose ku dhufo si aad u dhageysato codka warbixinta oo aan ka soo xiganay VOASomali Source: VOASomali
IGAD oo Ergay Cusub u Magacowday Soomaaliya
Urur goboleedka IGAD ayaa maanta ergay cusub u magacaabay arrimaha dalka Soomaaliya. Ergayga cusub ee IGAD u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu magacaabaa Maxamed Cali Guyo. Ergaygaasi ayaa la sheegay inuu xilligan hayo xilka ah...
Qatar oo bilowday in ay cunno ka keensato dalka Cumaan
Maamulka dekadda dalka Qatar ee Hamad Port ayaa sheegay in ay hadda wixii ka dambeeya cunnto ka soo raran donaan dalka Cumaan, kaddib markii ay dalalka Khaliijku Xayiraad dhanka Cirka, Dhulka iyo Baddaba ay...
DAAWO: Ra’iisul Wasaaraha iyo Mas’uuliyiin kale oo la afuray ciidamada ku guda jira xasilinta caasimadda
Suldaanka oo tagay Widhwidh
Warbixin: Magaalada Adhicadeeye
Dugsi sare: Adhicadeeye
www.adhicadeeye.com © 2017. All Rights Reserved.